26 / 04 / 2021 26 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 787 Views စာ0မှတ်ချက် 40421 Belle အောက် Kevin နှင့် Bob, BrickHeadz, Lego, Lego BrickHeadz, Lego Minions, Lego Minions: Gru ၏ထ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego သုံးသပ်ချက်များ, Minions, Minions: Gru ၏ထ, ဆန်းစစ်ခြင်း, reviews
အဆိုပါ Minions မြို့ထဲမှာစတိုင်ကျတဲ့မြည်းလေးတစ်ကောင်ရှိလာတယ်၊ ပြီးတော့သူမကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်နေတယ် Lego ဖွဲ့စည်းသည် BrickHeadz 40421 Belle အောက်, ကီဗင်နှင့် Bob.
MinionsRise of Gru သည်လူကြိုက်များသောလူရွှင်တော်များနှင့်အတူလူကြမ်းအဖြစ်များလတ်ဆတ်သောစင်မြင့်ကိုမြင်သည် BrickHeadz, ဒါပေမယ့်သစ်ကို set ကိုပုံသေနည်း remix ကြလိမ့်မည်, ဒါမှမဟုတ်ဒီဇိုင်နာများစည်၏ Belle Bottom ရောက်ရှိနေသလဲ
theme: Lego BrickHeadz အမည်သတ်မှတ်မည် - 40421 Belle အောက်, ကီဗင်နှင့် Bob ဖြန့်ချိ: ဧပြီလ 26, 2021
စျေးနှုန်း: £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 အပိုင်းပိုင်း: 309 အသေးစားပုံများ: 0
ဗီယင်နာသို့ခရီးသည်ရုပ်ရှင်အသစ်အတွက်လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်ရန်ဘက်ဖြစ်သော Belle Bottom ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ဇာတ်ကောင်အကြောင်းအနည်းငယ်သာလူသိများသော်လည်းသူမသည်ယခုအချိန်တွင်ဖြန့်ချိသည့် trailers များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရသူမသည် sass, wit နှင့်ကြွယ်ဝသောစတိုင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ယခင်စရိုက်လက္ခဏာနှစ်ခု p နေတုန်းartအတွက်ဖြတ်ပြီးရဖို့ icularly ခက်ခဲသည် BrickHeadz, အ Lego ဒီဇိုင်နာများသည်ပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင် ruffled အင်္ကျီမှသူမ၏ခါးပတ်ပတ်လည်ကိုရွှေချည်နှောင်တိုင်အောင်, သူမ၏ဖက်ရှင်သဘောမျိုးထပ်မံအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်ပွုပါပွီ။ Afro တောင်မှသင့်တော်သောအရွယ်အစားရှိပြီးဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အခြားအလေးချိန်များထက်မျှတသောအလေးချိန်ရှိသည် BrickHeadz အစုံ။
ရွှေနားကပ်များကိုလည်းသူမအနားတွင်ချိတ်ထားသည်။ အလင်းရောင်တွင်နေရာချသည့်အခါမော်ဒယ်တွင်အရောင်တောက်ပစေသည်။ ၎င်းသည်တည်ဆောက်မှုနှင့်အပြီးသတ်မော်ဒယ်နှစ်မျိုးလုံး၏ထူးခြားမှုကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးသည် Lego လူစုလူဝေး။ ဘော့နှင့်ကီဗင်တို့လည်းလိုက်ပါကြသည် Minions ရုပ်ရှင်၏ namesake အဖြစ်သုံးတွင်ထည့်သွင်းခံရဖို့သဘာဝကျပါတယ်။ အခြားသုံးလုံး - အကျယ်ဆုံးနှင့်မတူသည် BrickHeadz သူတို့ရှေ့တွင်ထိုစုံတွဲသည်သူတို့၏ ဦး ခေါင်းကိုသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဆင့် ဆက်လက်၍ တည်ဆောက်သည်၊ ထပ်ခါတလဲလဲသော်လည်း၊
ကီဗင် ap ပါရှိသည်artစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအဆောက်အအုံနည်းစနစ်သည်မြက်မြက်ပင်တစ်ပေါက်ကိုလှည့်ပတ်နေသောအခေါင်းပေါက်ထဲသို့ထည့်သည်။ ဤသည်ကီဗင်တစ်ခုတည်းသောစေသည် BrickHeadz လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောပန်းရောင်အုတ်ကိုဇောက်ထိုးထားရန်။ ပါဝင်သည်အဆိုပါနှစ်လုံးကိုနှိုင်းယှဉ် ၄၀၄၂၀ Gru၊ Stuart နှင့်အော့တို, ကီဗင်နှင့်ဘော့ များသောအားဖြင့်အားလုံး၏အ ၀ တ်အထည်များဖြစ်သောဂျင်းဘောင်းဘီကိုမဝတ်ပါနှင့် Minions, ဒါပေမယ့်အစားလိမ္မော်ရောင် jumpsuits don, ယခင် nunchucks တရံတပ်ဆင်ထားစဉ်။
အားလုံးလိုပဲ BrickHeadz, ဒီအစုံအတွက်ထဲသို့ honed အာရုံစူးစိုက်မှု, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကျက်သရေအားလုံးနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမ minifigures ပါရှိပါတယ် Lego ရုပ်ပြောင်သူတို့ကိုယ်သူတို့။ တစ်ခုချင်းစီသည်၎င်းကိုအချို့သောကျက်သရေတစ်ခုယူဆောင်လာပြီးသူတို့၏တောက်ပသောအရောင်များနှင့်အတူထုတ်ဖော်ပြသရန်သေချာသည်။
သုံးခုပါဝင်သည် BrickHeadz - ကြီးမားသောတစ်ခုနှင့်အသေးစားနှစ်ခု - စျေးနှုန်းသည်အခြားသုံးဆထုပ်များနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည် 40466 တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပန်ဒါ။ ဤကဲ့သို့သောအရာသည်၎င်းအစုံ၏ပိုမိုရက်ရောသောဘက်တွင်ကျရောက်သကဲ့သို့ခံစားမှု၏အမြင့်ဆုံးအဆုံးတွင်အပိုင်းအစတစ်ခုရေတွက်နေသည်ဟုခံစားရသည်။
မော်ဒယ်တွင်ငွေအတွက်ကောင်းသောတန်ဖိုးကိုမတွေ့ရန်ခဲယဉ်းသည်၊ ဇာတ်ကောင်များ၏ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းအလွန်မြင့်မားခြင်းအတွက်သာမကဘဲart အချိုးအစား, ဒါပေမယ့် Belle Bottom သည်အခြားနှိုင်းယှဉ်သယ်ဆောင်သောအလေးချိန် BrickHeadz.
သငျသညျတရံအဘို့အ angling နေတယ်ဆိုရင် Minions (သူတို့ကိုအထင်ကရအပြာရောင်ဝတ်စုံများတွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းကိုစိတ်ထဲမထားပါနှင့်), 40421 Belle အောက်, ကီဗင်နှင့် Bob ဖွယ်ရှိသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး option ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးကသာရက်ရောလျှင်မမှန်ပါ BrickHeadz, သို့သော်ဇာတ်ကောင်များအပြီးသတ်ထားခြင်းတွင်အနည်းဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်တစ်ချက်ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ကီဗင်၏အောက်ဘက်အုတ်လား၊ Bob ၏သေးငယ်သောအရွယ်အစားသို့မဟုတ် Belle Bottom ၏ဖက်ရှင်စတိုင်ဖြစ်သည်။
BrickHeadz ထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့် ideas အားလုံးစုဆောင်းတဲ့သူတွေဟာအစုံလိုက်အကြောင်းအရာကိုအမြဲတမ်းစိတ် ၀ င်စားစရာမလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင်ဘယ်သူလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်တောင် Minions သင် (သင်၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဝေမျှရန်အခမဲ့ခံစားရ) သင်ဤအစုနှင့်အတူကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေပါလိမ့်မယ်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ BrickHeadz Minions 40421 Belle Bottom, ကီဗင်နှင့် Bob?
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဤအစုသည်အနည်းငယ်တိုသောတည်ဆောက်မှုကိုပေးသည် BrickHeadz။ Belle Bottom ၏ဒီဇိုင်းကိုသင်သဘောကျရန်အချိန်ယူရသော်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၂၅ မိနစ်သာကြာလိမ့်မည်။
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ BrickHeadz Minions 40421 Belle Bottom, ကီဗင်နှင့် Bob?
မော်ဒယ်များတွင်အုတ် ၃၀၉ ခုပါဝင်ပြီး ၁၁ ခုပုံနှိပ်ထားသည်။ Belle Bottom သည်သူမ၏ခရမ်းရောင် ၀ တ်စုံကိုဖြတ်ပြီးရွှေသံကြိုးတစ်ချောင်းကိုတပ်ဆင်ထားသည် ကီဗင်နှင့်ဘော့ နှစ် ဦး စလုံးအင်္ကျီလက်အဘို့အစင်းအုပ်ကြွပ်တရံရှိသည်။
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ BrickHeadz Minions 40421 Belle Bottom, ကီဗင်နှင့် Bob?
အားလုံးသုံး BrickHeadz အကျယ် ၅ စင်တီမီတာ၊ အနက် ၅ စင်တီမီတာရှိသည်။ Belle Bottom သည် ၁၀ စင်တီမီတာအမြင့်ရှိကီဗင်သည် ၈ စင်တီမီတာအထက်တွင်ရှိပြီး Bob က ၅ စင်တီမီတာအထက်တွင်ရှိသည်။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ BrickHeadz Minions 40421 Belle Bottom, ကီဗင်နှင့်ဘော့ကုန်ကျခဲ့သလား
40421 Belle အောက်, ကီဗင်နှင့် Bob ယခင်နှင့်ကိုက်ညီရှိနေမည် BrickHeadz triple-packs ကိုပေါင် ၁၇.၉၉ / ဒေါ်လာ ၁၉.၉၉ / ယူရို ၁၉.၉၉ ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။